ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: အိမ်
အိမ်ဆိုတာ အမိုး ၊အကာ ၊နေဒဏ် မိုးဒဏ် ခံနိုင်ယုံနဲ့ အိမ်လို့ဆိုနိုင်သလားးး ကျနော်ကတော့ အိမ်ဆိုတာ နွေးထွေးတဲ့ ရင်ငွေ့တွေနဲ့ ချစ်စရာဆည်းလည်းလေးတွေ ဇနီးရဲ့ ဂရုဏာသံ သမီးကြီးရဲ့ စာကျက်သံ သမီးငယ်လေးရဲ့ တီတီတာတာ ချစ်စရာစကားလေးတွေကြားမှာ ကျနော့်ရဲ့ အိမ် ကလေးကတော့ လှပအသက်ဝင်နေပါတယ် ။ ဒီအိမ်ကလေးမှာ စီးဖို့ အတွက် ဒန်း မရှိ၊ လှပတဲ့ ပန်းအိုးတွေလည်းမရှိ ခြံဝန်းထဲက အဆောင်ယောင်ဆိုလို့ ကျနော်ပျိုးထောင်ထားတဲ့ ငှက်ပျော်ပင်တစ်ချို့သာ ။ ခံစားတက်ရင်တော့ ဒါတွေကလည်း သဘာဝအလှတရားတွေပါပဲ ။အိမ်တွင်း ပရိဘောဂတွေကတော့ သေတ္တာတစ်လုံး ကျနော့် မိသားစုအ၀တ်ထည်တစ်ချို့ အိုးခွက်ပန်းကန် အနည်းငယ်က ကျနော်ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံးပါပဲ ။ကျနော့်နာမည် “လှဝင်း”ပါ အသက်ကတော့ ၃၀ ကျော်လို့ ၅ နှစ်နီးပါ စွန်းပြီပေါ့ နာမည်နဲ့ မလိုက်ဖက်စွာ ကျနော့် ဘ၀ကတော့ မလှခဲ့တာအမှန် မွေးကတည်းက အဖေ အမေ ဘယ်သူဆိုတာမသိခဲ့ရဘူး ။ကျနော့် မွေးစားဖခင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သာ ခုချိန်ထိ အသက်ရှင်နေနိုင်တာပါ။
မိသားစုမေတ္တာကို ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကျနော့်အတွက် လှပတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်လေးတွေ လက်တွေ့ မှာ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး နားလည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ကျနော့်ဇနီး “မိသန်း” ။တစ်ချို့တွေက ပြောတယ် ကျနော့်ဇနီးကမလှဘူးတဲ့ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မျက်စိထဲမှာတော့ သူမက အလှဆုံးပါပဲ ပြီးတော့ သူမရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲက အလှတရားကို ကျနော်က သေချာမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဇနီးမို့ ကြွားတယ်ထင်ကြအုံးမယ် ။ သူမ ကျနော့်အပေါ် ဘယ်လောက်နားလည်သလဲဆိုရင် ညနေပိုင်းအလုပ်ပင်ပန်းလို့ အပန်းဖြေစရာ တောအရက်တစ်ပုလင်းကို ကိုယ်တိုင်အသင့်ဝယ်ထားပေးတက်တယ် ကြက်ကြော်မဟုတ်ပေမယ့် ကြက်သွန်နီလေးပါးပါးလှီး ပဲလှော်လေးနဲ့ သုတ်ထားပေးတက်တယ် စကားပြောစရာအဖော်လား ကျနော် ပြောသမျှကို မငြီးမငြူနဲ့ နားထောင်ပေးတက်တဲ့ အဖော်က ကျနော့်ဇနီးပဲပေါ့ သူမက ကျနော်နဲ့ အတူ လောကဓံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် ခံစားချက်တွေ မျှဝေခံစားပေးတက်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း မိခင်မေတ္တာတွေလည်း ပေစွမ်းနိုင်တဲ့ ဘ၀အတွက်အရေးပါတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ပေါ့ ကျနော်သူမကိုသိပ်ချစ်တယ်။
အိမ်ရဲ့ ဆည်းလည်းလေးတွေ အဖြစ် “စု” ဆိုတဲ့ ၅ နှစ်သမီးလေး၊ နှင်းပွင့်လေးလိုသိပ်ကိုလှတဲ့ “ဖြူနှင်း”ဆိုတဲ့ ၃ နှစ်သမီးလေးကို ကျနော်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် ရွှေပေါ်မြတင် မမွေးခဲ့ရပေမယ့် သူတို့လေးတွေက ကျနော့်အတွက်တော့ အဖိုးဖြတ်မရတဲ့ ရတနာလေးတွေပါ။ကျနော်ပေါက်လိုက်တဲ့ ပေါက်တူးသွားတွေပေါ်မှာ သမီးလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေပါတယ် ချွေးစက်လေးတွေကျတိုင်း သူတို့အတွက် လာမယ့်နွေဦးအတွက် ချစ်စရာ ဂါဝန်လေးတွေ ဆင်မြန်းနိုင်ဖို့လ်ို့ ကျနော် ခံစားရတယ် ။ ကြမ်းရှရှကျနော့် လက်တွေကို ဇနီးသည်က ကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျနေတာတွေ့တော့ အားပေးရသေးတယ် “ ဒို့တွေ အနာဂတ်လှဖို့ ဒီလက်ကြမ်းတာလောက်လေးကို မျက်ရည်ကျလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲမိန်းမရယ် မင်း ဒီထက်ကြမ်းတဲ့ အခြေနေမျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားစမ်းပါ ” ။ တစ်မြန်နှစ်က ကွမ်းဈေးတွေကောင်းတော့ ကျနော်တို့မိသားစုလည်း စွန့်စားလိုက်တယ် လိုအပ်တဲ့ ကွမ်းတိုင် မြက်ရှင်းခ လူငှားခတွေ မလောက်တော့ ရှိတော့တန်ဆာ မရှိတော့ ၀မ်းစာဆိုတဲ့အတိုင်း မိန်းမ နားကပ်၊ သမီးကြီး နဲ့ သမီးငယ် နားကပ်လေးကို ရောင်းလိုက်ရတယ် ။ အဲ့ဒီနေ့ကပေါ့ သိပ်လှချင်တဲ့ ကျနော့်သမီးငယ်လေးက သူ့ရဲ့နားကပ်လေးကို ကြည့်ပြီး အသံမထွက် နှုတ်ခမ်းတွေ တစပ်စပ်တုန်နေပြီး မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျလာလိုက်တာ ကျနော့်ရင်ထဲ သံချွှန်တွေနဲ့ ထိုးခံရသလို (မငိုပါနဲ့ သမီးရယ် မငိုပါနဲ့တော့ အဖေ့ရင်တွေ ကွဲတော့မယ်-- အသံတိတ် ရင်တွင်းစကား) ။အသုံးမကျတဲ့ မင်းအဖေ၊ တာဝန်မကျေတဲ့ အဖေကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ကွာ။
ကံမကောင်းခြင်းတွေ ကျနော့်ဆီကို မကြာမကြာရောက်လာတက်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ယုံကြည်နိုင်ပါ့မလား။ ရှိသမျှအရင်းလေးတွေ ပုံအောလိုက်ရပေမယ့် ကျနော့်တို့ရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးဖြစ်တဲ့ ကွမ်းပင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့မေလ နာဂစ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်သွားခဲ့ရတယ် ။ ဘာနဲ့စားရမလဲ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဒီတစ်ခါ ဘ၀ကို အရှုံးပေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ကျနော့်ကို ဇနီးသည်က အားပေးခဲ့တယ် ။ရွာထဲကို အချေးငှာ မထွက်တက်သော လူများများနဲ့ ရောထွေးရတဲ့ အလုပ်တွေကို မရဲဝံသော ၊ အိမ်ထောင်စကျပြီးတည်းက မိဘဆီက လက်ဖြန့်မတောင်းတက်တဲ့ ဇနီးက ဒီတစ်ခါတော့ သူ့မိဘတွေကို အကူညီတောင်းဖို့ဆိုပြီး သမီးငယ်ကို လက်ဆွဲ ယောက်ခမတွေရွာကို နှစ်ညအိပ် ခရီးထွက်သွားလိုက်တယ်။ အသင့်တင့်ပြေလည်တယ်လို့ဆိုရမယ့် သဘောကောင်းတဲ့ ယောက်ခမတွေက အရင်းနှီးလေး ၁သိန်းကျော်ကျော် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီနှစ်ရွာမှာ လူတိုင်းလိုလို အဆင်ပြေနေကြတဲ့ ပုရစ် ကောက်တဲ့ အလုပ်ကအဆင်ပြေနေတာဆိုတော့ ကျနော်လည်း မီးစက်လေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ လိုအပ်တာလေးတွေဝယ် ၀မ်းရေးကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ ငရဲကြီးတာတွေ ဘာတွေ မသိတော့ပါဘူး ကျနော့် မိသားစု စားရဖို့အတွက်ဆိုရင်ခိုးကျွေးရ ကျွေးရ နောက်ဆုံး ဓားပြတိုက်သင့်တိုက်ရမှာပဲ ဒါ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့လောဘပဲ ။လသာတဲ့ ညဆို ပရစ်တွေအရမ်းကျတာပေါ့ မီးစက်မောင်းထားတဲ့ အနီး ပိတ်ဖြူဖြူတွေကို ရိုက်ခတ်တဲ့အသံတွေနဲ့ ပရစ်တွေက တဘုတ်ဘုတ် ။ အိမ်က ယူခဲ့တဲ့ ဖျာကြမ်းနဲ့ စောင်ကိုခြုံပြီး သမီးငယ်လေးက အိပ်ပျော်နေတယ် မိသားစု ၃ ယောက် ကောက်လိုက်တာ တစ်ကောင် ၂၀ကျပ်လောက်ရတဲ့ ပရစ် တစ်ညတည်း ကောင်ရေ ၃ ထောင်ကျော်ရလိုက်တော့ တော်တော်ကိုအဆင်ပြေသွားတယ်။ ယောက်ခမတွေဆီကလှည့်ထားတဲ့ ငွေလည်း ပြန်ဆပ်နိုင်ပြီး မိန်းမ နဲ့သမီးလေးတွေအတွက် နာကပ်လေးတွေလည်း ကျနော်ပြန်ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ်ကိုပျော်နေတယ် ။ ဒီ့ထက်ပျော်စရာကောင်းတာက ကော်ပေတံလေးကိုင်ချင်ပေမယ့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လုပ် ၀ါးခြမ်းပြားပေတံ ၊ စုပေါင်းစပ်ပေါင်း စာရွက်ပေါင်းချုပ် ၊ ညစ်နွမ်းနွမ်းကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံ ဘဲဥကြော် တစ်လုံးနဲ့ ထမင်းထုတ်ပြီး ဆင်းဆင်းရဲရဲ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ ကျနော့်သမီးကြီးက သူ့အတန်းမှာ ပထမရတယ်တဲ့ ။
ဒီနေ့ သမီးကြီး ဆုပေးပွဲသွားကြမယ် မနက်အဆာပြေ ချဉ်ပေါင်းဟင်းချိုးနဲ့ ငါးခြောက်ကြော်စားအပြီးတော့ သွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ် ။ တစ်နှစ်လောက်နေလို့မှ အ၀တ်သစ်တစ်စုံမ၀ယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဇနီးကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စွာ ကြည့်မိတော့ မင်္ဂလာမဆောင်ခင် ကျနော်ဝယ်ထားပေးတဲ့ ပါတိတ်ဝမ်းဆတ်လေးနဲ့ သိပ်ကိုလှနေပါလား မနေ့ကမှ သူ့အမေ ၀ယ်ထားပေးတဲ့ ကျောင်းစိမ်းဂါဝန်လေးနဲ့ သမီးကြီးက ပိတိ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သမီးငယ်ကတော့ မကြီးဟာက မလှဘူး မီးဟာက လှတာ ဆိုပြီး အားကျမခံ နှုတ်ခမ်းကလေးထော်ပြီး အလိုမကျတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့။မခမ်းနားပေမယ့် ရွာက မူးလတန်းကျောင်း ခန်းမထဲမှာတော့ ကျောင်းသားမိဘ၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ စည်ကားနေတယ်။ သိပ်မကြာခင် ဆုပေးပွဲကြေငြာတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ မိုက်ပေါ်က ထွက်လာတဲ့အသံက
“သူငယ်တန်း ပထမဆုရရှိသော အဘ “ ဦးလှဝင်း” ရဲ့ သမီး “မစုမြတ်ဝင်း” ဆုယူရန် ဆင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွပါ”
ကြေငြာသံအဆုံး လက်ခုပ်သံတွေကြားလိုက်ရတဲ့အခိုက် ကြက်သီးမွေးညင်းတွေထပြီး ၀မ်းသာလွန်းလို့ ဂုဏ်ယူမိလွန်းလို့ စိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်တော့သလို သတိထားမိလိုက်တော့ မှတ်မိစအရွယ်ထဲက မကျတက်တဲ့ ကျနော့် မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေ စီးကျနေပါလား ဒါ ပိတိမျက်ရည်ပေါ့ ။ကျနော် ကြိုးစားရမယ် အဆင်းမရှိတဲ့ အိမ်ကလေး တန်ဆာတွေ ကင်းမဲ့တဲ့ အိမ်ကလေးကို မှီခိုနေကြတဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးတွေ အတွက် ကြိုးစားရမယ် ။ ကျနော်က ဒီအိမ်ကလေးရဲ့ ခင်ပွန်းတစ်ယောက် ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ကျနော့် အိမ် ကလေး တစ်စစ အသက်ဝင်လာပြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး။ ကျေဇူးပါ ကံကြမ္မာ ငါ့ကို မျက်နှာသာပေးတဲ့အတွက် အမြဲတမ်းကျေးဇူးပါ ။
P>S = ကျနော် ဒီဝတ္ထုလေးကိုရေးဖူးတာကြာပါပြီး ပျက်သွားတဲ့ဘလော့မှာပြန်မရပေမယ့် ဖိုးဝမှာတင်ဖူးထားတာလေး ပြန်ကူးတင်လိုက်တာပါ ။
house ဘဲဖြစ်နေမှာတဲ့ Home မဖြစ်ဘူးတဲ့လေ
မောင်မျိုးရဲ့ Home လေးစီကိုလာသွားပါတယ်
“အိမ်” ဆိုတဲ့ အိမ်လေးအကြောင်းကို နှစ်ခြိုက်စွာခံစားသွားပါတယ် နော်... မတွေ့တာကြာပြီ.. ခြေရာကောက်ပြီး လိုက်လာတာ :) Cbox က မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်..။
နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ဟာဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပာဘူး
I like your " House" and I also remember that (Dhiyarmo) sang named " Home."
ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိကို ၀င်ခံစားသွားမိတယ်.. အစ်ကိုရေ...။း))။
I want to find money honestly for my family. I don't want to kill...
ဖတ်နေရင်းတောင် မျက်ရည်လည်သွားတယ် ..တကယ်...အိမ်ကိုလွမ်းနေတာ..မောင်မျိုးပိုစ့်ကြောင့် ငိုတောင်ငိုချင်လာင်္ပြီ ;(
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ..း)) ဒီလိုစာမျိုး များများရေးပါ ..